Tempolin'i Egypt | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | 05/10/2021 17:00 | Ejipta, Inona no ho hita
Raha tianao ny tantara, ny sivilizasiôna taloha ary ny mistery, dia tsy maintsy eo amin'ny làlan-kaleha fitetezam-paritany i Egypt. Indray mandeha amin'ny fiainanao dia mila mankany Egypt ianao ary hahita ny zava-mahatalanjona voalohany.
ny tempolin'i Ejipta Mahavariana izy ireo ary afaka jerenao amin'ny sary sy fahitalavitra maro izy ireo, fa ny fahitana azy ireo mivantana sy mivantana dia zavatra iray izay tsy voavidim-bola. Halahelo azy ireo ve ianao? Eto izahay dia mamela anao ny lisitry ny tempoly tsara indrindra any Egypt, ireo izay tokony ho hitanao eny na eny.
Ireo fanamboarana ireo an'arivony taona izy ireo ary tsy isalasalana fa zavatra be voninahitra izy ireo. Ny fitsangatsanganana voalohany tany Egypt dia nahagaga ny mpandeha rehetra, fa raha tsara vintana ianao mandeha imbetsaka dia tsy hitsahatra ny tsy ampoizina ary tsara izany.
Tsy isalasalana fa i Egypt dia manana ny tempoly lehibe indrindra eto an-tany ary amin'ny tsipika ankapobeny dia nanomboka tamin'ny taonjato fahefatra talohan'i JK. Marina fa malaza eran'izao tontolo izao ny maro amin'izy ireo, fa misy koa ny hafa izay tsara tarehy nefa tsy manana gazety firy.
Tany Egypt dia efa taloha ny zava-drehetra, amin'ny toerana rehetra dia misy rava na tempoly taloha. Avy any Kairo ka hatrany Luxor, manaraka an'i Neily ka hatrany Aswan, dia tsy azo atao ny tsy mahita ny sasany amin'ireto fananganana mahafinaritra ireto.
Voalohany dia mila manome anarana ny Tempolin'i Karnak izay naorina teo anelanelan'ny 2055 talohan'i JK sy ny taona 100 AD Natokana ho an'ny andriamanitra telo, Amun-Ra, Mut ary Montu, ary tsy maintsy lazaina fa ny tempoliny lehibe io no tranom-pivavahana lehibe indrindra naorina.
Joro mahavariana ny Hypostyle Hall, tranokala rakotra fanampian'ny colonnades izay fahita tany Egypt saingy azo ianarana tsara amin'ity tranonkala ity. Somary goavambe ity efitrano ity, misy tsanganana 134 sy andalana 16. Eto dia mety ny manao ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny mpitari-dalana ary mihaino tsara ireo pitsopitsony.
El Tempolin'i Abu Simbel Tany amin'ny lemaka iva Neily no nananganana azy, saingy Tamin'ny fananganana ny tohodrano Aswan dia tsy maintsy nafindra izy io ho sangan'asa injeniera maoderina. Izany dia nitranga tamin'ny taona 60 ary ny toerana fananganana voalohany dia tavela teo amin'ny fanambanin'ny farihin'i Nassar.
Androany dia milamina ny Tempolin'i Abu Simbl: Misy sarivongana 20 an'ny Ramses II ary naorina manodidina ny 1265 talohan'i Kristy, fa ireo colossi ireo dia ao anatin'ny toe-javatra tena tsara. Ny matetika atao dia ny manofa fitsangatsanganana an-tsambo avy any Luxor mankany Aswan ary mendrika ny mitety ny 280 kilometatra eo anelanelan'ireo teboka roa ireo. Fomba iray hafa ny mitondra ny sambo Neily mankany Aswan ary handany andro roa any.
Ny Tempolin'i Medinet Habu dia natokana ho an'i Ramses III ary ny sasany amin'ireo tsanganana aminy dia mitazona ny hosodoko. Eo amoron'ny andrefan'ny Luxor ary Izy io no tempoly fahagola faharoany tany Egypt.
Tempoly iray izay nahagaga ahy foana, satria ny fanarenana dia mamela ny fanokafana varavarankely ho an'ny lasa, ny Tempolin'i Horthepsut any Mortur. Hatshepsut dia mpanjakavavy maty tamin'ny 1458 talohan'i JK ary ny fasany kanto sy lehibe akaikin'ny Lohasahan'ny Mpanjaka izany, eo amoron'i Neily, ny mpanjakavavy dia iray amin'ireo vehivavy manan-danja indrindra tamin'ny androny ary iray amin'ireo farao nahomby indrindra, nanjaka 21 taona.
Ny tempoly izy io dia miorina eo amoron'ny hantsam-bato lehibeManana ambaratonga telo izay mankany amin'ny tany foana izy ary nilaza ny arkeology fa tamin'ny androny, dia nanana zava-maniry lehibe ireo tany ireo, na dia tany efitra be aza izao. Mety tsy hita ny zavamaniry, saingy tranonkala manaitaitra ihany io. Betsaka ny fitsangatsanganana an-dàlana amin'ny Lohasahan'ireo Mpanjaka amin'ny ankapobeny.
El Tempolin'i Ramses II tokony ho fantatrao koa io. Rehefa dinihina tokoa, Ramses II dia iray amin'ireo farao malaza sy malaza indrindra. Tany am-boalohany a tempoly fasana tena mitovy amin'ny an'ny Medinet Habu, ho azy sarivongana goavambe natokana ho an'ny mpanjaka.
El Tempolin'i Luxor Malaza eran'izao tontolo izao. Ny tempoly dia ao an-tanàna, amoron'ny Neily ary fahitana mahafinaritra, indrindra amin'ny alina rehefa maty ny jirony ary azonao atao sary izany. Ilay tempoly dia tao amin'ilay antsoina hoe Thebes, ary toa natsangana teo ambanin'ny tarana faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Omeo voninahitra Andriamatoa Amun-Ra ary samy hafa ny zorony amin'ny ora samihafa.
Voatahiry tsara ilay trano ary mbola manana rafitra maro, indrindra ny colonnade izay mampitohy ny tokotaniny roa. Ary ny toerana masina izayhajaina an'i Amona dia mbola misy taila sasany ihany. Mazava ho azy, Lova Iraisam-pirenena izany.
El Tempolin'i Kom Ombo Eo amin'ny Neily izy io ary natokana ho andriamanitra roa samy hafa, Horus sy Sobek. Izy io dia tempoly kambana misy fananganana roa natsangana tamin'ny fitaratra. Tsy dia antitra toy ny sasany satria namboarina teo ambanin'ny tarana-mpanjaka ptolemaic (niavian'ny Grika ary taorian'i Aleksandra Lehibe). Taty aoriana, teo ambanin'ny fanjakan'ny romana, dia nisy fanitarana sasany. Eto izy ireo dia hita, ohatra, Mamahom-boay 300 ary androany dia nasehon'izy ireo tao amin'ny Tranombakoka Crocodile izay azonao vangiana.
El Tempolin'i Edfu dia eo amoron'ny Neily and io no iray amin'ireo notehirizina tsara indrindra teto amin'ny firenena. Ny fananganana azy dia natomboka tamin'ny 237 talohan'i JK ary nifarana tamin'ny taona 57 taorian'i JK, nataon'ny tanan'i Cleopatra, Ptolemy XII. Mbola manana ny tafon-tranony izy ka manome fahatsapana hafa, akaiky kokoa ny fotoana.
El Tempolin'i Seti I dia ao Abydos ary misy soratra Dynasty faha-XNUMX fantatra amin'ny anarana hoe Lisitry ny Mpanjaka ny Abydos, lisitra iray misy ny vanim-potoana misy ny sarin'ireo farao israelita tarana-mpanjaka avy any Menes ka hatramin'ny rain'i Seti I, Ramses I. Ny tempoly dia eo ambonin'ny reniranon'i Neily.
Azontsika atao koa ny manonona ny tranom-paty amin'ny Lohasahan'ny Mpanjaka, na dia tsy dia marefo na manaitra toy ny sasany aza izy ireo. Eto ianao dia afaka mahafantatra ny Tempolin'i Ramses IV, an'ny Merneptah ary ny an'i Ramses VI. Manana efi-trano goavambe izy ireo, sary hosodoko maro loko izay taratry ny seho avy amin'ny Bokin'ny Maty ... Ny marina dia rehefa nahita vato niboridana be dia be izy ireo, ny loko marevaka, ny habaka ary ny fahatsapana fiadanam-po amin'ireo toerana ireo. Tsy misy sarcophagi na zavatra hafa toa izany, nankany amin'ny tranombakoka na mpangalatra daholo izany, fa tranonkala mendrika hitsidihana io.
Farany, ny Colossi an'i Memnon, naorina manodidina ny 1350 talohan'i JK. Colossi roa izy ireo misolo tena an'i Faraona Amenotep III amin'ny toerana mipetraka. Tany am-boalohany dia niambina ny fidirana amin'ny tempolin'ny fatin'io farao io izy ireo. Ny tempolin'izy ireo dia saika nanjavona ary ny colossi dia simba ihany koa, fa mila mitsidika azy ireo ianao.
Amin'ireto tempoly ireto dia manampy alina any an'efitra izy, ny tolakandro amin'ny bazary, mamakivaky an'i Kairo, ny fitsidihana ny Piramida ary mazava ho azy, ny fitsidihana ny Museum Archaeological of Kairo. Izany hoe tsy ho adinonao mihitsy i Egypt.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Ejipta » Tempolin'i egypta